प्रकाशित: बिहिबार, असोज १, २०७७, ००:०५:०० नेपाल समय
काठमाडौं– कोरोना महामारीबाट विश्वभर नौ लाख ३५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने कुल संक्रमितको संख्या २९ करोड पुगेको छ।
महामारीका कारण नेपालमा ३७९ जनाको मृत्यु भएको छ। ५८ हजार ३२७ जना संक्रमित भएका छन्। कोभिड–१९ कै कारण सयौं जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। शारीरिक, आर्थिक र मानसिक क्षति पुगेको छ।
यी सबैका कारण विश्वमै ठूलो सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन भइरहेको छ।
तर, हाम्रो वरपरको वातावरण, सावधानीका तौरतरिकाले भने महामारीलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ– जानाजान संकटमा पर्न चाहेजस्तो।
लामो समयको लकडाउनले अर्थव्यवस्था र मानिसको दिनचर्यामै गम्भीर समस्या आउन थालेपछि सरकारले लकडाउन धेरै खुकुलो बनाएको छ। पसल खुलेका छन्, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। असोज १ देखि लामो दूरीको यातायात सेवा र आन्तरिक उडान पनि सञ्चालन हुने भएका छन्।
यद्यपि, संंक्रमण झन्–झन् बढ्दो छ र यसका चौतर्फी असर पनि चुलिँदो छ।
मास्क लगाउने यो कस्तो तरिका ?
कोभिड–१९ महामारीबाट बच्ने उपाय मास्क र स्यानिटाइजरको उपयोग गर्नु, नियमित साबुनपानीले हात धुनु र एकआपसमा दूरी कायम राख्नु हो।
तर सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाएका मानिस प्रशस्तै देखिन्छन्। लगाएकामध्ये पनि कसैले घाँटीमा झुन्ड्याएका हुन्छन् भने कसैले मुखमात्रै ढाकेर नाक बाहिर निकालेका हुन्छन्।
परिवारसँगै हिँडिरहँदा बाबुआमाको अनुहारमा मास्क हुन्छ भने बच्चाले लगाएका हुँदैनन्। मास्क लगाउने बाबुआमाले पनि बारम्बार हातले मास्क छोइरहेका हुन्छन्।
पसल वा सुपरमार्केटमा पनि स्यानिटाइजर प्रयोगका लागि बाध्य बनाएको पाइँदैन। कतै स्यानिटाइजर राखिएको हुँदैन त कतै लगाउने मान्छेले पनि ठिकसँग लगाउँदैनन्। कतै स्यानिटाइजर वितरण गर्ने मान्छेले निकै फारो गरी दिइरहेको हुन्छ।
हामी पसलमा गयौं भने पनि किन्नुपर्ने नपर्ने सबै वस्तु नछोएर चित्त बुझ्दैन। सार्वजनिक स्थलमा एकअर्कालाई छुने, खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा नाकमुख नछोप्ने कुरा पनि अपवाद होइन।
मास्क लगाउने, सम्भव हुने ठाउँमा केही मिटर दूरी कायम गर्ने र निःशुल्क स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नका लागि त हामी तत्पर छैनौं भने व्यक्तिगत स्थलमा कस्तो सावधानी अपनाइन्छ होला? अनि गाउँघरको अवस्था झन् के होला?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको अझै खराब अवस्था आउन बाँकी नै रहेको बताइरहेको छ।
महामारी बढ्दै जाँदा हाम्रो देशमा परीक्षण दर बढ्न सकेको छैन। बरु उल्टो लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण गरिरहनु नपर्ने भन्दै छन् सरकारका केही निकाय। हाम्रो देशको स्वास्थ्य व्यवस्था यसै पनि राम्रो छैन, अस्पतालका बेडहरु भरिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा हामीले सावधानी अपनाउन लापरबाही गर्‍यौं भने महामारी अझै भयावह बन्न सक्छ। बेलैमा होस गरौं।
चौरसियाका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै वीरगन्जमा नेकपाको प्रदर्शन